कथा : टुँडिखेल र चिया पसल्नी « Muluk Sanchar
कथा : टुँडिखेल र चिया पसल्नी
जाडो बढ्दै थियो । पुस महिना सुरु भएपछि लिबाङमा जाडो पनि ह्वात्तै बढ्न थाल्छ । यसपालि पनि चिसो बढेको छ ।
म डेराबाट निक्लेपछि पहिलोपटक एउटी चिया पसल्नीको चिया पसल भेटिन्छ । त्यो पसलमा एउटी अधबैंसे महिला बस्छिन् । चिया पसल उनले केही महिना अघि मात्रै खोलेकी हुन् ।
चिया पसलमा बिहानै पुगेर चिया पिउनु मेरो दैनिकी हो । पसल खुलेको पहिलो दिनदेखि हालसम्म नियमित रुपमा मैले चिया पिउँदै आएको छु । ती महिला अलि गफाडी छिन् । पसलमा आएका ग्राहकहरुसँग जिस्किन्छिन् । पसलमा आएकाहरुले पनि उनलाई जिस्काउँछन् । सायद उनी आफ्नो व्यापार बृद्धिका लागि जिस्किन्थिन् कि के हो कुन्नि मैले अझैसम्म बुझ्न सकेको छैन ।
सधैं झैं त्यसदिन पनि म उनकै चिया पसलमा चिया पिउन पुगेँ । ठीक त्यसै समयमा एउटा मोटरसाइकल आएर चिया पसल अगाडि घ्याच्च रोकियो । लामा लामा कपाल पालेका दुई जना युवाहरु झरे मोटरसाइकलबाट । पसल पस्दा तिनीहरुले मलाई कुच्लान्झैं गरे र मेरो नजिकैका कुर्सीमा आएर बसे ।
ती केटाहरु चिया पसल्नीसँग घरिघरि जिस्किन्थे । पछि ती महिला पनि जिस्कन थालिन् चिया पकाउँदै । दुईमध्ये एउटा केटा भने खासै बोलिरहेको थिएन । चलाख देखिने अर्को चाहिँ निकै गफाडी जस्तो लाग्थ्यो ।
‘सपना, म त तिमीलाई माया गर्छु नि ।’ चलाख खालको त्यो केटो बोल्यो । चिया पसल्नीको नाम सपना रहेछ भन्ने भेउ पाएँ मैले । मैले उनको नाम थाहा पाएको त्यतिबेलै हो पहिलो पटक ।
‘म पनि त गर्छु नि ।’, मस्किदै चिया पसल्नी महिलाले तत्कालै जवाफ फर्काइन् ।
‘तिमीले चिया पसल गरेर राम्रो पैसा कमाएकी हौली । तिमी हिरोइन, म हिरो भएर एउटा फिलिम बनाम् । तिम्रो लगानी, मेरो निर्देशन । हुन्छ है ? हा हा हा ।’ केटाले आफ्नो योजना सुनाइहाल्यो ।
म भने चुपचाप चिया पिउदै छु । खासमा म बडो शान्त स्वभावको देखिएको हुन सक्छु । तिनै जनातिर नजर लगाउदै मैले केटा र महिला बीचको वार्ता सुनिरहेँ ।
‘हाम्ले बनाएको फिलिम पनि चल्ला र ? हिहिहि’, पसल्नी पनि जिस्किइन् ।
‘तिमी यति राम्री छौ । म पनि केमा कम छु र ? हामीले बनाएको फिलिमले ५१ दिन हैन, ५१ हप्ता मात्र हैन, ५१ वर्ष पनि मनाउन सफल हुन्छ होला ।’ केटाले गफ दिइरहेकै छ ।
‘हिहिहि ५१ वर्षसम्म ? कस्तो फिलिम हो त्यो ?’ पसल्नीले आश्चर्य पोखिन् ।
‘मैले फिलिमको कथा बनाइसकेको छु । फिलिममा द्वन्द्व र पटकथा रमेशले (अर्को केटोतिर इशारा गर्दै) लेख्छ । अनि फिलिम पूरा भइहाल्छ ।’ कमलले उसको साथी रमेशतिर हेर्दै भन्यो ।
‘खै मैले लेखेको फिलिमकोे द्वन्द्व र पटकथा पनि कस्तो होला ? कहिल्यै फिलिम नहेरेको मान्छीलाई के थाहा । यो कमल पनि के के भन्छ । १÷२ वर्ष सहर बसेर फर्केपछि खुब फुर्ती लगाउँछ ।’ पहिलो पटक रमेशले मुख खोल्यो ।
गफाडी केटा र उसको साथीको नाम पनि मैले जानेँ ।
लिबाङबजारमा ती दुई दुवैलाई मैले पहिले देखि देख्दै आएको थिएँ । बाटोमा, चिया पसलमा र केही होटेलहरुमा म उनीहरु लगायत अन्य केटाहरुलाई देख्छु । तर कहिल्यै परिचय भएको छैन । न त ती चिया पसल्नीसँग नै परिचय गरेको छु ।
एकैछिनमा उनीहरुले पसल्नीलाई चिया पकाउन लगाए । चिया पाक्दै गरेको ग्याँसको आगोबाट सल्काएर एउटाले चुरोट तान्यो । चुरोटको सर्को तानेपछि ती केटाहरु पसल्नीसँग झन जिस्कन थाले । उनीहरुले घरिघरि चुरोटको धुँवा हावामा उडाउथे र अनेक थरिका गफ सुनाउथे । मानौ चुरोटको धुँवा र उनका गफ बराबर हावामा उडिरहन्थे ।
‘कथा कस्तो छ भने नि, मैले सपनालाई माया गरेको हुन्छु । तर सपनाले रमेशलाई माया गरेको हुन्छ । रमेशले पनि सपनालाई माया गर्छ ।’ चुरोटको धुँवा फ्याक्दै कमलले फेरि फिलिमकै प्रसंग जोड्यो । ‘मैले तिमीहरु दुईले एक अर्कालाई माया गरेको थाहा पाउँछु ।’ उसले थप्यो ।
‘अनि के हुन्छ ?’ सपनाले चाख देखाइन् ।
‘अनि मैले तिमीहरुको मायालाई टुटाइदिन्छु क्या ।’ एक्कासी कमल बोल्यो ।
‘हामी दुईको मायालाई पनि कसरी टुटाइदिनु हुन्छ ? असम्भव ।’ सपनाको जवाफ चाँडै सुनियो ।
‘हा हा हा फिलिममा जे पनि हुन्छ नि यार । यो के साँचो माया हो र ?’ लामो हाँसो हाँस्दै कमल बोल्यो, ‘एक साँझ रमेश र म तिम्रो पसलमा रक्सी खान आउँछौं । मातिएपछि मैले तिमीलाई बलात्कार गर्छु । मैले बलात्कार गरेको रमेशले देख्छ । उसले सहनै सक्दैन । अनि मलाई धोकेवाज भनी तिमीमाथि आक्रमण गर्छ । तिमीलाई मार्छ । म भाग्छु । रमेश पनि भाग्छ । अनि कथा सकिन्छ ।’
‘हा हा हा ।’ फेरि कमलले लामो हाँसो हाँस्दै भन्छ, ‘अनि यो फिलिम चल्दैन त ?’
‘कथाको नाम के राख्ने नि थाहा छ ?’ एकोहोरो कमल बोलेकै छ, ‘चिया पसल्नी’ !
‘हा हा हा ।’
‘खै के के भन्छन् मोराहरु । यस्ता गफ नगरी खा’को पनि पच्दैन पापीहरुलाई ।’ सपना यत्ति चाहिँ बोल्छिन् ।
पसलमा अरु पनि ग्राहक थपिन्छन् यसैबेला । सपनाले फेरि अरु ग्राहकका लागि चिया पकाएर ख्वाउने आफ्नै काममा लाग्छिन् ।
चियाको पैसा तिरेर म बाहिरिन्छु पसल्नीको पसलबाट ।
बाटोमा पुग्दा मैले सोचेँ, ‘केटाहरु लफङ्गा भए पनि सिर्जनशील जस्ता छन् है ! कथा त राम्रै होला जस्तो छ । कलात्मक तरिकाले मैले पो यस विषयमा कथा लेख्नुपर्छ कि !’
मनमनै कथाको ढाँचा तयार पारेर म मेरो कोठाभित्र पसेँ ।
केही दिनपछि !
चियापसलमा रमेशले भनेको त्यो कथा सुनेको केही दिनपछि पहिले जस्तै म सपना साहुनीको चिया पसलमा गएँ । सधै ंझैं म चिया पसलतिर त्यसदिन पनि विहानै गएँ । तर पसल बन्द थियो । पसल आसपासमा मान्छेहरुले कानेखुशी गरेको देखेँ । मैले अर्को चिया पसलमा पुगेर चिया पिउने जमर्को गरेँ । त्यस चियापसलमा मेरो साथी श्याम अघि नै पुगेर चिया पिउँदै रहेछ ।
‘थाहा पाइस् ? सपना त आज रातिदेखि कता हराइछे नि ?’ श्यामले कुरा सुरु ग¥यो । घटनाबारे विवरण थप्दै उसले भन्यो, ‘केटी खुब मस्किन्थी । पोइल गइ होली ।’
आनीबानी हेर्दा मलाई पनि उस्तै लाग्यो । श्यामको कुरामा मैले पनि सहमति जनाएँ । ‘अब त तेरो चिया पसल पनि फेरिने भयो नि ?’ श्यामले जिस्काउने पाराले बोल्यो ।
श्याम र म चिया पिउँदै थियौं । एक हुल प्रहरीहरु धाङ्सीखोलातर्फ लागे । ‘सपनालाई खोज्न गएका हुन् कि क्या हो ?’ श्याम प्वाक्क बोल्यो । हामी दुवैले प्रहरीलाई हेरिरह्यौं । प्रहरीहरु लस्करै तुलसी बोर्डिङको आडैबाट महिला विकासतिर जाने बाटोतिर लागे ।
‘पोइल गएकीलाई पनि प्रहरीले किन खोज्न जाला । अरु कुनै काम होला ।’ मैले अनुमानको भरमा बोलेँ ।
हामीले चिया खाइसक्दाखेरि टुँडिखेलमा घाम पसिसकेको थियो । चिया पसलबाट निक्लियौं । अनि घाम ताप्न टुँडिखेलतिर लाग्यौं । अरु उभिए जसरी हामी दुई पनि पूर्व, उत्तर र पश्चिमतिर अनुहार घुमाउदै उभियौं । अरु मानिसहरु पनि थपिए ।
टुँडिखेलका मान्छेहरु सबैले एकापसमा मुखामुख गरिरहेका छन् ।
‘पर चोककी चिया पसल्नी तल धाङ्सीखोलामाथि खरबारीमा मृत अवस्थामा भेटिएकी छे रे ।’ एउटाले कुरा सुनायो । अरु धेरैले पनि त्यो कुरामा थप्दै भने, ‘हो हो मैले पनि त्यही सुनेँ ।’
सबैका मुखबाट एउटै प्रकारको कुरा सुनियो ।
उतिखेरै प्रहरीहरुले सपनाको शव टुँडिखेलमा ल्याइपु¥यायो । शव वाहन पनि तत्कालै टुँडिखेलमै ल्याइयो । वाहनले झिलिमिली झिलीमिली गर्दै बत्ती चम्कायो । मानिसहरु एकै ठाउमा झुम्मिए ।
के भो, के भो भन्दै सबैले अनुहार निन्याउरो पारेको देखियो । शव वाहनमा राखेर सपनाको शवलाई पोष्टमार्टम गर्नका लागि रेउघाको अस्पतालतिर पठाइयो ।
पत्रकारसँग कुरा गर्दै घटनाबारे प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘सपनालाई बलात्कार गरी हत्या गरिएको आशंका छ । यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
घटनास्थल नजिकै पुरुषको पर्स भेटिएको प्रहरीले सूचना बताए । ‘पर्सभित्रको कागजमा कमल मगर लेखिएको मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्स पनि भेटिएको छ ।’ ती प्रहरी अधिकारीले फेरि सूचना बाँडे ।
सपनाको शव टँडिखेल ल्याएर अस्पताल पु¥याउदासम्म मैले अस्तिनै देखेका कमल र रमेश नाम गरेका दुई केटालाई देखिनँ । यताउता हेरेँ । तर तिनीहरुको अनुहार कतै देखिनँ । त्यस यता मैले लिबाङबजारमा हुइकिने तिनीहरुको त्यो पल्सर बाइक र तिनीहरुलाई देखेको छैन । त्यो घटना भएपछि तिनीहरु टुँडिखेलमा आएका छैनन् ।
बलिउड अभिनेत्रीको ‘फाटेको जिन्स’ फेसन ट्रेण्ड
‘तिमि बिना’ सार्वजनिक (भिडियो)
त्रिवेणीका अग्नीपीडितलाई आर्थिक सहयोग
बाझाङमा पहिरोमा पुरिएर एक जनाको मृत्यु